कर्पोरेट Archives - Recent Nepal News
केही ठाउँमा ट्रान्सफर्मरले नधान्दा विद्युत आपूर्तिमा समस्‍या : कुलमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबारदेखि कुनै पनि ठाउँमा झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्या अन्त्य भएको बताएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गर्दै पछिल्लो समय केही प्राविधिक कारणले बिजुली आउने-जाने समस्या भएकोमा अब त्यो समस्या नदोहोरिने बताएका हुन् । तीन चार दिनदेखि विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। यो समस्या काठमाडौंमा मात्र देखिएको हो। ...
डिजिटल वालेट खल्तीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्कको ४० प्रतिशत लगानी
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले खल्ती डिजिटल वालेटमा लगानी गरेको छ । लगानीसँगै डिजिटल वालेट खल्तीमा वर्ल्डलिङ्कको ४० प्रतिशत स्वपुँजी स्वामित्व रहने भएको छ । नेपालको ७७ वटै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइरहेको वर्ल्डलिङ्कले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित खल्तीमा लगानी गरेको जनाएको छ । वर्ल्डलिङ्क र खल्तीको साझेदारीले सहरीसहित ग्रामीण ...
टेलिकमको ‘भीओएलटीई’ सेवा तपाईको मोबाइलमा चल्छ ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सोमबारबाट फोरजीमा आधारित भ्वाइस ओभर लङ टर्म इभोलुसन (भीओएलटीई) सेवाको परीक्षण सुरु गरेको छ । विश्व दूरसञ्चार दिवसको अवसर पारेर टेलिकमले सीमित मोबाइल सेटहरुमा मात्रै चल्नेगरी उक्त सेवा परीक्षणको रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रयोगकर्ताका लागि परीक्षण शुरु गर्नुअघि टेलिकमले भीओएलटीईका लागि उपयुक्त मोबाइल सेटहरूमा परीक्षणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। जसको लागि सामसङका ...
काठमाडौैै । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले नेपाल पठाउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले दिएको जानकारीअनुसार आईओसी र एनओसीबीचको सहमतिअनुरुप आइतबारराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोल तथा डिजेलर मट्टितेल मूल्य २र २ रुपैयाँ बढाएर पठाएको हो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २० रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलको १०३ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले एल.पी. ग्या...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, कुनको भाउ कति पुग्यो ?
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ। सोमबार राती १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले इन्धनको मूल्य बढाएको हो । मूल्यबढेसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर ११० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ९३ रुपैयाँ कायम भएको छ । एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत् छ । अहिले कायम हुने नयाँ बिक्री मूल्यअनुसार निगमलाई अझै पनि प्रत...
विदेश जाने ७६% घटे पनि रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि, ४ महिनामै भित्रियो ३ खर्ब ३७ अर्ब
काठमाडौं । कोरोना महामारीका बीच पनि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा ३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिकी डलर...
वर्ल्डलिंक र आईमार्क विस्टा ग्लोबल अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन र आईमार्क सम्मानित भएका छन् । वर्ल्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजि एन्ड सर्भिसेज एलायन्सले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन र आईमार्कलाई विस्टा ग्लोबल आईसीटी एक्सीलेंस मेरिट अवार्ड वाट सम्मानित गरेको हो । मलेसियामा भइरहेको टेकफेस्ट लाइव एक्स रोड टू डब्ल्यूसीआईटी मलेशिया २०२० को दोश्रो दिन विस्टाले वर्ल्डलिंकलाई डिजिटल अपर्चुनिटी÷ ईन्क्लुजन अवार्ड र आईमार्कलाइ कोविड १९ वेस्ट ईन्ड...
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा शसक्त र स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यले ‘मेरी उनीलाई’ मुद्दति खाता योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘मेरी उनीलाई’ मुद्दति योजनाले, महिलाहरुका नाममा बचत गर्न, महिलाहरुलाई बचतमा अभ्यस्त बनाउन, व्यक्तिगत खाता बाहक महिलाहरुलाई राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्न र आर्थिक रुपमा महिलाहरुलाई सबल बनाउन, सहयोग पुर्याउने बैंकले जनाएको छ । एकलाख रुपैयाँभन्दा बढी रक...
५ पैसामा नेपाल टेलिकम मोबाइल डाटा प्याक
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रतिएमबी ५ पैसामा मोबाइल डाटा उपलब्ध गराएको छ । धेरै डाटा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि टेलिकमले सस्तो दरमा इन्टरनेट प्याक उपलब्ध गराएको हो । यससँगै एकैपटक धेरै डाटा प्रयोग गर्नुपर्ने उपभोक्ताको आवश्यकता सम्बोधन भएको टेलिकमले दाबी गरेको छ । कम्पनीले प्रस्तुत गरेको ‘लार्ज डाटा प्याक’ एकपटक सब्स्क्राइब गरेपछि लामो समयसम्म चलाउन पाइन्छ र तुलनात्मक रूपमा निकै सस्तो पर्छ ।...